'Xaaskaaga oo aad la qabato howsha guriga waxay ka hortaggeysaa khilaafka qoyska' - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Elaine Jung
Image caption Jean Pierre,oo 32 jir ah waxay ku nooshahay tuulada Mwulire ee bariga dalka Rwanda
Barnaamij looga golleeyahay xallinta khilaafaadka qoyska soo dhexgala oo laga hergeliyay dalka Rwanda waxaa uu ragga baraya sida ay uga qeyb qaadan lahaayeen cunta karinta iyo nadaafadda guriga taaso ah howl inta badan ay qabtaan haweenka.
Darasaad dhawaan lasoo saaray ayaa muujinaysaa in arrintaasi ay qeyb qaadan karto xallinta dhibaatoyinka ka dhex jira qoysaska.
Muhoza Jean Pierre wuxuu garaaci jiray xaaskiisa, wuxuuna u arkay sababta uu u guursaday inay ahayd inay carruur u dhasho oo kaliya ah.
"Waxaan raacayay waddadii uu qaaday aabahay, aabahey shaqada guriga ma uusan qaban jirin" ayuu yiri Muhoza Jean Pierre.
Wuxuu sheegay in xaaskiisa uu ku oran jiran 'inay asan wax qabsan karin' isla markaasna qoyskii ay kasoo jeeday ay dib ugu laabato.
Balse wuxuu sheegay in xilliggaasi ka dib ay noloshiisa wax iska baddaleen, wuxuuna bartay sida guriga loo nadiifiyo iyo cunno karinta.
Barnaamijka xallinta khilaafadka qoyska waxaa laga bilaabay tuulada Mwulire oo ku taalla bariga waddanka Rwanda, waxaana ragga lagu dhiiragelinaya inay qabtan howsha guriga oo ay kamid tahay inay hayaan carruurta oo ay ka qayb qaataan xannaaneyntooda, shaqadan inta badan waxaa qabta haweenka.
Jean Pierre wuxuu sheegay in mashruuca lagu magacaabo 'Bandebereho' oo looga la jeedo luqadda dalkaasi 'tusaale wanaagsan' wuxuu wax ka baddalay noloshiiisa.
wuxuu galay fasal lagu barto cunto karinta, nadiifiinta guryaha iyo sidii looga hortaggi lahaa caadooyinka soo jireenka ah ee bulshada ee ka dhanka ah xuquuqda haweenka.
'Ragga dhabta ah cunto ma kariyaan'
Macalimiin ka socda mashruuca 'Bandebereho' ayaa Jean Pierre baray howl uu rumaysnaa inay qaban karto xaaskiisa.
Wuxuu yiri"Marka aan guriga ku laabto waxaan dib u qaban jiray wixi la i soo baray, waxaan sameyn jiray tabbabar iyadoo la ii hagayo sida aan cuntada u karinayo"
"Hadda waxaan bartay sida cuntada loo kariyo, waxaan dhaqaa dharka carruurta, waxaan bartay sida loo kariyo mooska iyo burka" ayuu yiri ninkan lagu magacaabo Muhoza Jean Pierre.
Image caption Jean Pierre iyo xaaskiisa waxay wada joogaan muddo 10 sana ah
Inakstoo la baddali karo Jean, haddana waxay u muuqata in saaxibadiisa aysan niyad jab ku reebi karin si uu u qabto howsha guriga, waxay ku dhahaan "Ragga dhabta ah cunto ma kariyaan'.
Wuxuu sheegay in qoyskiisa iyo saaxibadiisa ay aaminsan yihiin in xaaskiisa ay siisay daroogo sababtoo ah waxay rumaysan yihin in nin fayoow aanan lagu arki karin waddooyinka isagoo dusha ku sita qoryaha dabka lagu shido.
Balse Jean Pierre wuxuu iska dhaga tiray arrimahaasi, wuxuuna sii watay howsha guriga.
Waxaa uu sheegay in carruurtiisa ay hadda kalgacal dareemayaan isla markaasna xaaskiisa ay hadda ku howlantahay ganacsi.
"Sidii ay ii la dhaqan jirtay xaaskeyga, wax wayn ayaa iska baddalay, si xun ayay iila dhaqan jirtay, hadda wax kasta waxaan ku dhameynaa wadahadal"
Toddobaadka Haweenka ee BBC Somali
"Xoriyad ayaan siiyay xaaskeyga, hadda way shaqeysaa, anigana waan shaqeeyaa, horraan waxaa ka dhaadhicin jiray inay guriga joogto, diyaar ayay tahay mar kasta oo aan u baahdo" ayuu yiri Jean Pierre.
Cabsi iyo xoriyad
Xaaska Pierre,Musabyimana Delphine waxay sheegtay in horraan ay xoriyaad la'aan iyo cabsi ay ku nooleyd.
Waxay tiri "Mararka qaar waxaan isku haystay in aan ahay sida qof shaqaale ah, weliggey niyadeeyda kuma soo dhicin in haweeney ay yeelan karto lacag sababtoo ma qaadanin wakhti aan kaga fakaro howl aan ganacsi ku samaysto"
Waxay sheegaty in hadda ay haysato xoriyad ku filan ayna guriga dibadda uga baxdo si ay usoo shaqeysato.
Image caption Mashruuca 'Bandebereho wuxuu howsha guriga baray rag badan oo ku nool dalka Rwanda
Delphine waxay ka baxdaa gurigeeda subaxdii si ay mooska ugu suuq geeyso magaalada halka ninkeeda Jean Pierre carruurta afarta ah ay dhaleen uu sii ilaaliyo isla markaasna uu cunto usii kariyo.
Waxay tiri "marka aan yimaado guriga, waxaan u imaadaa cuntada oo diyaar ah"
Mashruuca waxaa laga aasaasay dalalka Laatiin Amerika, waxaana fikraddiisa lahayd urur lagu magacaabo MenCare, waxayna rumaysan yihiin in ragga iyo haweenka ay kala qeybsabadaan howsha guriga gaar ahaan marka ay timaaddo cunto karinta iyo xannaaneynta carruurta.
Daraasad ayaa muujineysaa in lamanaayaasha is qaba ee ka qeyb qaatay mashruucan labo sano kaddib dalka Rwanda ay hoos u dhacday qalalaasaha iyo rabshadihii ka dhacay qoysaska iyo dhibaatooyinka ay ragga ku hayaan xaasaskooda dalkaasi.
Sida laga soo xigtay warbixin ay soo saartay waaxda qaran ee tirakoobka dalka Rwanda sannadii 2015-kii ayaa lagu sheegay in boqolkiiba 52 ragga dalkaasi ay tacaddiyo u gaystaan xaasaskooda.
Todobaadka Haweenka ee BBC Soomaali
Ha'yadda barnaamijkan bilaawday waxay dooneysaa mashruucan in la gaarsiyo dhammaan bulshooyinka dalkaasi.
Fidele Rutayisire oo ah guddoomiyaha ha'yaddan ayaa sheegay inay jiraan cadooyinka soo jireenka ee ka dhanka ah ilaalinta xuquuqda haweenka, taasina ay noqotay arrimaha ugu wayn ee dhaliya rabshadaha ka dhex dhaca qoysaska ku nool dalka Rwanda.
"Dhaqan ahaan, ragga ma qabtaan howsha guriga, waxayna maamulaan qoyska marka ay timaaddo go'aan qaadashada" ayuu yiri Fidele Rutayisire.
Delphine iyo Jean Pierre waxay sheegeen in hadda ay ku jiraan xilliga toddo-baxa, 10 sano kaddib oo ay is qabeen.